Warshadaha Xalka - Soosaarayaasha Shiinaha iyo Shirkadaha Xalka
Dib-u-habeynta biyaha waxay isticmaashaa tiknoolajiyada wareejinta dareeraha dareeraha ah ee gaarka ah si loo hagaajiyo isku mid ahaanta heerkulka gudaha markabka retort. Biyaha kulul waxaa horey loogu sii diyaariyey haanta biyaha kulul si loo bilaabo howsha nadiifinta ee heerkulka sare loona gaaro heerkulka degdega ah ee sii kordhaya, jeermiska ka dib, biyaha kulul dib ayaa loo warshadeeyaa waxaana dib loogu celiyaa haanta biyaha kulul si loo gaaro ujeedka tamarta keydinta.
Khadadka nadiifinta ee joogtada ah ee soo-celinta jeermiska-dhalista ayaa ka adkaatay caqabado farsamo oo kala duwan oo ka jira warshadaha nadiifinta, waxayna kobcineysaa howshan suuqa. Nidaamku wuxuu leeyahay bar farsamo oo aad u sareysa, tikniyoolajiyad casri ah, saameyn nadiif ah oo nadiifin ah, iyo qaab dhismeedka fudud ee nidaamka jihaynta ka dib nadiifinta. Waxay la kulmi kartaa shuruudaha ka shaqeynta joogtada ah iyo wax soo saarka ballaaran.
Adoo kudaraya marawax kusalaysan nadiifinta uumiga, aaladda kululaynta iyo cuntada baakadeysan waxay kujiraan xiriir toos ah iyo qasab qasab ah, joogitaanka hawada ee sterilizer-ka waa la ogolyahay. Cadaadiska waxaa loo xakameyn karaa si ka madax banaan heerkulka. Nadiifiyuhu wuxuu dejin karaa marxalado kala duwan iyadoo loo eegayo alaabada kala duwan ee baakadaha kala duwan.
Dib-u-celinta nadiifinta jeermiska ee ku-buufinta biyaha waxay isticmaashaa wareegga jirka ee wareegaya si ay uga dhigto waxa ku jira xirmada. Kuleylka oo ku qabow kuleylka kuleylka, sidaas darteed uumiga iyo biyaha qaboojintu ma sumeynayaan alaabta, mana loo baahdo kiimikooyin lagu daweeyo biyaha. Hawsha biyaha waxaa lagu buufiyaa badeecada iyada oo loo marayo bamka biyaha iyo sanqadhaha loo qaybiyay dib-u-celinta si loo gaaro ujeedada jeermiska. Heerkulka saxda ah iyo xakamaynta cadaadiska waxay ku habboonaan kartaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin la soo baakadeeyay.
Dib-u-celinta biyo-celinta Rotary Rotor waxay isticmaashaa wareegga jirka ee wareegaya si ay uga dhigto waxa ku jira qulqulka, isla markaasna ay socodsiiyaan biyaha geeddi-socodka si loo hagaajiyo isku mid ahaanta heerkulka soo-celinta Biyaha kulul waxaa horey loogu sii diyaariyey haanta biyaha kulul si loo bilaabo howsha nadiifinta ee heerkulka sare loona gaaro heerkulka degdega ah ee sii kordhaya, jeermiska ka dib, biyaha kulul dib ayaa loo warshadeeyaa waxaana dib loogu celiyaa haanta biyaha kulul si loo gaaro ujeedka tamarta keydinta.
Steam iyo Rotort retort waa in la isticmaalo wareegga jirka ee wareegaya si ay uga dhigaan waxa ku jira xirmada. Waxay ku jirtaa geedi socodka in hawada oo dhan laga saaro dib-u-celinta iyadoo daadadka markabku ay ku qulqulayaan uumiga oo u oggolaanaya hawadu inay ka baxdo marinnada hawo-mareenka. markabka wakhti kasta inta lagu jiro tallaabo kasta oo lagu nadiifinayo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara cadaadis hawo-badan oo lagu dabaqay inta lagu jiro tallaabooyinka qaboojinta si looga hortago qallooca weelka.
Soo-celinta Steam-ka loo yaqaan 'Saturated Steam Retort' waa habka ugu da'da weyn ee jeermiska ku jirta weelka ee ay bini-aadamku u isticmaalaan. Daasadda ayaa jeermiska looga dhigi karaa, waa nooca ugu fudud uguna kalsoonida badan ee soo noqnoqda. Waxay ku jirtaa geedi socodka in hawada oo dhan laga saaro dib-u-celinta iyadoo daadadka markabku ay ku qulqulayaan uumiga oo u oggolaanaya hawadu inay ka baxdo marinnada hawo-mareenka. markabka wakhti kasta inta lagu jiro tallaabo kasta oo lagu nadiifinayo. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara cadaadis hawo-badan oo lagu dabaqay inta lagu jiro tallaabooyinka qaboojinta si looga hortago qallooca weelka.
Nidaamka jeermiska-dhaliyaha jirka ee joogtada ah
Nidaamka nadaafadda jirka ee hidde-wadaha jirka waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha. Geedi socodka wax soo saarka oo dhan, laga soo qaado alaabta ceyriinka ilaa naqshadeynta farsamada, wax soo saarka geedi socodka, maareynta tayada iyo rakibaadda goobta iyo howl gelinta, waxaa haga, kormeera oo tababara injineerada xirfadleyda ah. Shirkaddayadu waxay soo bandhigaysaa tikniyoolajiyad casri ah iyo karti-xirfadeedyo ka yimid Yurub. Nidaamku wuxuu leeyahay astaamaha shaqada joogtada ah, hawlgalka aan cidna wadin, nabadgelyada sare, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
Isbeddelka ku yimaadda habeynta cuntada ayaa ah in laga weecdo maraakiibta yaryar ee soo noqda loona wareejiyo qolofka waaweyn si loo wanaajiyo waxtarka iyo badbaadada wax soo saarka. Maraakiibta waaweyn waxay muujinayaan dambiilo waaweyn oo aan gacanta lagu qaban karin. Dambiilo waaweyn ayaa si fudud aad u tiro badan oo aad u culus in qof keli ahi ku dhaqaaqo.